Kulan MW JDFI la Qaatey Bulshada Godey - Cakaara News
Kulan MW JDFI la Qaatey Bulshada Godey
Godey(CN) Sabti, 31 October 2015, kadib booqashadii galbeedka shabeele ay ku tageen madaxweynaha JFDI, MW DDSI iyo waftiyadu ayay kulan balaadhan la qaateen bulshada ku dhaqan magaalada Godey. kulankan balaadhan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka Gobalka Shabeele, Maamulka Magaalada Godey, Xubno ka tirsan Kabineega heer Deegaan, Odayaasha, Dhalinyarada, Hooyooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Godey
Kulankan oo ay ujeedadiisu ahayd mid lagaga hadlayay xoojinta nabadgalyada, horumarka iyo maamulka suuban ee shantii sano ee la soo dhaafay guulo laga soo hooyiyay ayaa waxaa oogu horeyn furay Madaxweynaha DDSI mudane Cabdi Maxamud Cumar isagoo madaxweynuhu ka waramay in isbadalka balaadhan ee uu deegaanku sameeyay ay lafdhabar u yihiin shacabka deegaanka oo ay garab taagan yihiin xukumada DDSI iyo xukumada dhexe. wuxuuna madaxweynuhu sheegay in deegaanku wakhtigan ka gudbay hagardaameyntii dhiigmiiratadii UBBO oo shacabku si niyadsami ah haatan oogu tafaxayteen kamidho dhalinta horumarka gaar ahaan dhanka wax soo saarka beeraha si uu dalku u noqdo mid uga gudba beeraleyda dhanka warshadaha ugana mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. madaxweyne mudane Cabdi Maxamud Cumar ayaa balanqaaday in xukumada iyo shacabka deegaanka oo gacmaha is heysta ay guulo lixaad leh ka keeni doonaan wajiga labaad ee qorshaha isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha.
Dhanka kale madaxweynaha JDFI mudane Dr.Mulatu Tashome oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa cadeeyay in deegaanka soomaalidu uu isbadal weyn oo la taabankaro ka sameeyay nabadgalyada, horumarka iyo maamulka suuban islamarkaana deegaanku qaaday tubta wadanku ku hiigsanayo soo afjarida saboolnimada wuxuuna ku dhiiri galiyay bulshada ku dhaqan gobalka shabeele inay u guntadaan ka faa'iideysiga khayraadka dihan ee dhulkooda hooyo. wuxuuna intaa raaciyay inay farxad galisay dhul beereedkii ay booqdeen isagoo xukumada DDSI uga mahadceliyay dadaalada ay galiyeen iyo isbadalka ay wakhtiga kooban keeneen. madaxweynaha ayaa shacabka gobalka ku adkeeyay in mudo dhaw waxsoosaarkoodu kaafiyo dalka iyo wadamada aan dariska nahay. ugu danbeyna odayaasha iyo hooyooyinka ku dhaqan magaalada godey ayaa cabiray siday ugu diirsadeen kaabayaasha horumarineed ee shantii sano ee la soo dhaafay ay heleen sida wadada laamiga ah, telefoonka , layidhka iyo biyaha waxayna carabka ku adkeeyeen in dhamaanba horumarka ay heleen ay sugida nabadgalyada iyo xasiloonida deegaanka sal u ahayd waxayna si gaar ah taas ugu mahad naqeen ciidamada difaaca qaranka, liyu booliska, xukuumada DDSI iyo dawlada dhexe. waxayna wacad ku mareen inay ka soo baxayaan kaalinta kaga aadan horumarka dhinaca waxsoosaarka beeraha iyagoo balan qaaday in shanta sano ee GTP2 waxsoosaarka beerahoodu gaadhi doono dhanka warshadaha.